Izindatshana zika-Ankit Patel zivuliwe Martech Zone |
Imibhalo nge I-Ankit Patel
U-Ankit Patel uyiMarketing / Project Manager ku I-XongoLab Technologies futhi I-PeppyOcean, ezinikezela ngezixazululo zewebhu ezisezingeni eliphakeme nezokuthuthukiswa kohlelo lokusebenza emhlabeni jikelele. Njengokuzilibazisa, ubhala ngobuchwepheshe obusha nobuzayo, ukuthuthukiswa kwamaselula, ukuthuthukiswa kwewebhu, amathuluzi wokuhlela, kanye nebhizinisi nokwakhiwa kwewebhu.
NgoLwesithathu, ngoMashi 27, 2019 NgoLwesithathu, ngoMashi 27, 2019 I-Ankit Patel
I-Artificial Intelligence icwebezela kakhulu embonini yesoftware ngamakhono ayo. Izinkampani zisebenzisa ubuhlakani bokufakelwa njengoba ziqhubeka nokukala nokuguquka. Eminyakeni embalwa edlule, sizwile izindaba eziningi zempumelelo maqondana nobuhlakani bokufakelwa. Kusukela ekusebenzeni kahle kwe-Amazon kuya ku-GE ukugcina imishini yayo isebenza, ubuhlakani bokufakelwa bebulokhu buhamba phambili. Ezweni lanamuhla, hhayi kuphela izinkampani ezinkulu kepha nezimboni zabakhangayo nazo ziyavela ngenani. Okwenziwe
Njengokuthi ushintsho lwe-e-commerce lufike kanjani ogwini lwezitolo, lungela olunye ushintsho ngendlela yobuchwepheshe be-blockchain. Noma ngabe yiziphi izinselelo embonini ye-e-commerce, i-blockchain ithembisa ukubhekana nokuningi kwayo futhi yenze ibhizinisi libe lula kumthengisi nakumthengi. Ukwazi ukuthi i-blockchain izoba kanjani nenzuzo enhle embonini ye-e-commerce, okokuqala, udinga ukwazi ngezinzuzo zobuchwepheshe be-blockchain kanye